Fihoaram-pahefana, fisamborana ary fanelingelenana: Ny mahazo ireo mpikatroka ara-tontolo iainana ao Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Migadra noho ny resaka tontolo iainana ireo mpitarika vondrom-piarahamonina
MpanoratraThe 88 Project
Voadika ny 25 Avrily 2022 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Nederlands, Español, عربي, English
Ankavia miankavanana: Nguy Thi Khanh, Cao Vinh Thinh, ary Nguyen Van Ho. Saripika mifototra amin'ny lahatsoratra iray navoakan'ny The 88 Project
Navoakan'ny The 88 Project, tranonkalam-baovao mahaleotena mitantara an'i Vietnam, voalohany ity lahatsoratra ity ary naverina navoaka tato amin'ny Global Voices ny endrika nasiam-panamboarana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Arovan’ny lalàna iraisampirenena ny zo hisitraka tontolo iainana madio sy ny zo hiteny hiaro azy. Any Vietnam, anefa, matetika enjehina, ampitahorina ary gadraina ireo olona miezaka mampiasa ireo zo ireo.
Nalaina an-keriny, nalaina am-bavany ary noesorina noho ny ezaka nataony hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro i Cao Vinh Thinh mpikatroka. Notazonin'ny polisy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna i Nguyen Anh Tuan rehefa avy nanetsika olona hanohitra ny fampandrosoana ara-barotra ao amin'ny Saikinosin'i Son Tra. Ary notafihan'ireo jiolahy mpomba ny governemanta tamin'ny fomba feno habibiana raha nandefa mivantana momba ny voina ara-tontolo iainana (nataon'ny) Formosa i Le My Hanh.
Mety hampigadra anao ihany koa ny maha-mpikatroka ara-tontolo iainana any Vietnam. Voaheloka higadra 14 taona noho ny “fanararaotana ny fahalalahana demaokratika” i Hoang Duc Binh, mpikatroka fanta-daza nitatitra ny fanapoizinana mahatsiravina ny zavamananaina an-dranomasina nataon'ny (orinasa) Hung Nghiep Formosa Ha Tinh, Ltd. (FHS) tamin'ny taona 2016. Nofaizina tamin'ny sazy fito taona i Nguyen Van Hoa taorian'ny nandefasany mivantana ny lahatsarin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana teo ivelan'ny orinasa Formosa. Vao haingana kokoa izay no voaheloka noho ny fanaparitahana “propagandy manohitra ny fanjakana” ary manefa sazy fito taona ihany koa i Dinh Thi Thu Thuy, injeniera momba ny fiompiana trondro, ary mpikatroka ara-tontolo iainana. Malaza amin'ny asany amin'ny fiatrehana ny fahapotehana ara-tontolo iainana vokatry ny fampiasam-bola vahiny tsy voafehy i Thuy.
Raha mifonja ireo mpikatroka ireo dia voatery nandao ny firenena kosa ny hafa. Tamin'ny taona 2018, nandeha an-tsesitany tany Etazonia i Nguyen Ngoc Nhu QuynhNguyen Ngoc Nhu Quynh (a.k.a. Neny Olatra) rehefa nigadra roa taona tamin'ny sazy 10 taona noho ny fanaovana “propagandy manohitra ny fanjakana”. Mpiara-manorina ny Network of Vietnamese Bloggers, izay nanoratra ireo lohahevitra isan-karazany, anisan'izany ny fahasimban'ny tontolo iainana i Quynh. Na dia natokana ho an'ireo mpikatroka tsindraindray aza ny sazy henjana toy izany, tato anatin'ny volana vitsivitsy izay ny famoretana nataon'ny governemanta dia niitatra nankany amin'ireo mpitarika ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (FTMF=ONG) voasoratra anarana ofisialy.
Nampihoron-koditra ny firaisamonim-pirenena Vietnamiana ny fisamborana sy fanagadrana mpitarika FTMF=ONG efatra fanta-daza tamin'ny fiandohan'ity taona ity — Mai Phan Loi, Bach Hung Duong, Dang Dinh Bach, ary Nguy Thi Khanh —. Nosamborina sy naiditra am-ponja noho ny “tsy fandoavan-ketra” ireo mpitarika efatra ireo, tetika nampiasain'ny governemanta hampanginana ireo mpitsikera izay tsy laitran'ny fitsarana hosaziana amin'ny fepetran'ny fiarovam-pirenena ao amin'ny fehezan-dalàna ady heloka bevava. Mamita sazy an-tranomaizina amin'izao fotoana izao i Loi, Duong, ary Bach raha mbola miandry ny fitsarana azy i Khanh izay voahazona tsy ara-dalàna. Maro no miahiahy fa misy ambadika politika ny fiampangana azy ireo ary, farafaharatsiny amin'ny ampahany, noho ny ezak'izy ireo hanara-maso ny fanarahan'ny governemanta ny fepetran'ny zon'olombelona ao amin'ny Fifanarahana Ara-Barotra EU-Vietnam (EVFTA) .
Asehon'ireo tantara ireo ny maha-zava-doza ny fitenenana ho fiarovana ny tontolo iainana ao Vietnam. Ny fanorisorenana, ny fandrahonana ary ny fanagadrana no sasantsasany amin'ireo tetika ampiasain'i Vietnam mba hampanginana ireo mpikatroka ara-tontolo iainana. Amin'ny Andron'ny Tany 2022, tokony hankalaza ireo mpikatroka be herim-po ireo isika ary hanameloka ny fanenjehan'ny governemanta Vietnamiana azy ireo.